Ergeyga gaarka ee dowllada Maraykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo gaaray Garoowe
November 19, 2011 - Written by
Garoowe ,19 Nofembar 2011,Wafdi uu hogaaminayo Wakiilka gaarka ah ee Dowladda USA Danjire James Swan ayaa maanta gaaray magaalada Garowe ee caasimadda Dowladda Puntland. Danjire Swan oo ay safarkaan ku wehliyeen sarakiil ka tirsan Safaarada USA ee dalkaKenyaiyo sarakiisha Hey’adda USAID ayaa waxaa madaarka Garowe kusoo dhaweeyey mas’uuliyiinta Dowladda Puntland oo ay horkacayeen Wasiirka Waxbarashada Cabdi Farax Juxa iyo Wasiiru-dowlaha Xiriirka Caalamiga Cabdulqadir Cabdi Xaashi.
Wafdiga SafiirkaUSAayaa loo soo galbiyey Madaxtooyadda Dowladda Puntland, halkaasoo uu Danjire Swan wadahadal kula yeeshay Madaxweynaha Puntland Cabdiraxman Maxamad Farole iyo Madaxweyne-ku-xigeenka Puntland Cabdisamad Cali Shire. Arrimihii laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa: hirgalinta heshiiskii “Roadmap” iyo horumarinta nabadeyntaSomalia; doorka iyo waxqabadka IGAD iyo Midowga Afrika (African Union) kaga aadan xasilintaSomalia; arrimaha ladagaalanka burcad-badeedka; siyaasadda DowladdaUSAee “Dual Track policy”; iyo taageerida mashaariicda bini’aadanimo iyo mashaariicda horumarineed ee DowladdaUSAka taageerto Puntland.
Wafdigii Danjire Swan ayaa ka kulmay Ganacsatada Puntland kana socday shirkadaha ku howlan qeybaha ganacsiga sida dhoofinta xoolaha, telefanada (telcom), tamarta (energy), xawaaladaha, caafimaadka, iyo adeega bulshada. Waa safarkii ugu horeeyey uu gudahaSomaliakusoo gaaro Danjire Swan tan iyo markii loo magacaabay Wakiilka gaarka ah ee arrimahaSomalia, bishii Agosto 2011.
Madaxweynaha Puntland iyo DanjirahaUSAayaa shir jaraa’id si wadajir ah ugu qabtay gudaha Madaxtooyadda kadibna Wafdigii Danjiraha ayaa dib ugu duulay magaaladaNairobi.